Qaramada Midoobay oo sheegtay in Halista Abaarta Soomaaliya ka Jirta ay korortay – GOBOLADA.COM
Qaramada Midoobay oo sheegtay in Halista Abaarta Soomaaliya ka Jirta ay korortay
June 4, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Qaramada Midoobay oo sheegtay in Halista Abaarta Soomaaliya ka Jirta ay korortay
Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay qoondo cusub oo dhan 20 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ka timid Sanduuqa Bani’aadantinimada Soomaaliya (SHF) si gargaar degdeg ah loogu fidiyo dadka halista ugu jira macluusha.
Adam Abdelmoula oo Iskuduwaha arrimaha bini’aadantinimada ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka jirto musiibo ka dhalatay abaaro ba’an oo ku habsaday qeybo badan oo ka mid ah dalka.
“Dhowr goobood, waxaa kordhay khatarta macluusha, tiro badan oo Soomaali ah ayaa qarka u saaran masiibo,” ayuu Abdelmoula.
Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, Soomaaliya ayaa ah dalka ugu badan ee ay abaaruhu saameeyeen ee Geeska Afrika. Ugu yaraan 6.1 milyan oo qof ayaa ay saamaysay, kuwaas oo 771,000 ka mid ahi ay ka tageen guryahoodii iyagoo raadinaya biyo, cunto iyo daaq.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 1.5 milyan oo carruur ah ay soo food saartay nafaqo-xumo ba’an, in ka badan 3,170 shuban biyood ah /daacuun iyo 2,460 xaaladood oo jadeeco ah ayaa la xaqiijiyay tan iyo bishii Jannaayo.
“Waxaan ka walaacsanahay in tiro aad u badan oo dad ah ay gaajo u dhintaan haddii aan si degdeg ah aan kor loogu qaadin gaarsiinta gargaarka bani’aadamnimo ee kuwa sida aadka ah ay u saameeyeen,” ayuu yiri Abdelmoula.
Deegaannada abaartu saameysay waa mid sii kordheysa, Dhulka oo qalalay, Roobka oo yaraaday iyo nafaqo darrada ka dhalatay baahida heysata Carruurta ayaa kordhisay welwelka laga qabo xaaladda ka taagan Soomaaliya” ayuu yiri Abdelmoula.
Sidoo kale wuxuu xusay in abaarta ku dhufatay Soomaaliya ay saameyn taban ku reebtay 6.1 Milyan oo ruux, 771,000 (Todobo boqol, todobaatan iyo kow kun) oo qof ayaa guryahooda isaga barakacay si ay u helaan Biyo, Cunno iyo Daaqa Xoolaha.
Isu duwan howlaha gargaarka bani’aadanimada ee QM ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey dadka haatan u dhimnaya gaajada ee laga soo warinayo deegaanada qaar ee dalka.
“Waxaan ka walaacsanahay in tiro aad u badan oo dad ah ay gaajo u dhintaan haddii aan si degdeg ah aan kor loogu qaadin gaarsiinta gargaarka bani’aadamnimo ee kuwa sida aadka ah ay u saameeyeen,” ayuu sii raaciyeyAdam Abdelmo.
Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in meelaha qaar uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka oo fara ba’an ku haya qoysaska danta yar ee soo barakacay.
Ugu dambeyn isu duwan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo howlaha kala duwan ee lagu taageerayo dadka tabaaleysan, si loo badbaadiyo noloshooda.
“5.5 Milayn oo ruux oo Soomaali ah ayaa 18% hela taageero aanay ku filneyn, sidaas awgeed waxa ay xubno katirsan Qaramada Midoobay soo jeediyeen in la kordhio sanduuqa taakulada ee Barakacayaasha si soo dejiyo,” ayaa markale lagu yiri warbixinta QM.
Wafdi uu Hogaaminayo Madaxweyne Xasan Sheekh oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb
Gudoomiyaha Aqalka sare oo la kulmay safiirada Talyaaniga & Midowga Yurub
Wasiir Beyle oo ka hadlay Heerka uu marayo Nidaamka Deyn Cafinta Soomaaliya